'Owasenkulisa waphoqa izingane ukuba zenze ucansi' | News24
LAST UPDATED: 2019-07-21, 13:02
'Owasenkulisa waphoqa izingane ukuba zenze ucansi'
Johannesburg - Uthishanhloko oneminyaka engu-68 ubudala wasenkulisa eseGoli kulindeleke ukuba namnhlanje ngoLwesibili alivume noma aliphike icala lokuthi watshela izingane ukuba zenze ucansi, wabe eseziqopha ngeselula.
Owesifazane, ovele eNkantolo yeMantshi ngoMsombuluko, angase abhadle ejele ngalesi sehlakalo asolwa ngaso, okuthiwa senzeka ngoFebhuwari ngonyaka ofile.
Ngokwamaphepha afakwe enkantolo, uthisha wasenkulisa wabikela uthishanhloko ukuthi ubone ingane yomfana oneminyaka emibili kanye neyentombazane eneminyaka emihlanu ubudala benza ucansi endlini encane.
Funda nalolu daba: Kushone izingane kusha imijondolo
Uthishanhloko wabizela izingane ehhovisi lakhe, bekhona nabanye othisha, ‘wazitshela ukuthi aziphinde lento ebekade ziyenza’, ngemuva kwalokho wakhipha umakhalekhukhwini wakhe waziqopha.
Kuthiwa i-video wayikhombisa abazali bezingane, nokuyibona ababikela amaphoyisa, bekhala ngokuthi wephume umthetho, iSexual Offences Act, ngokuphoqa izingane ukuba zenze ucansi.
Lo thishanhloko angase athole idilikajele ngenxa yokuthi izingane zineminyaka engaphansi kweminyaka engu-16 ubudala, kubika iTimesLive.